St. Eustatius bụ ebe obibi nke mbara ụwa mbụ nke Caribbean
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Eustatius na -agbasa akụkọ » St. Eustatius bụ ebe obibi nke mbara ụwa mbụ nke Caribbean
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • omenala • Education • News • Ịrụ ọrụ • Eustatius na -agbasa akụkọ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nke a bụ ọrụ mmuta nke Jaap Vreling na Maazị Ishmael Berkel na-eduzi. Jaap na-akụzi na Mahadum Amsterdam ma bụrụkwa akụkụ nke Dutch Research Group of Astronomy na 2010, bụ ebe amalitere ọrụ dome.
Ariwa nke dị na Lynch Plantation bụ ihe na-adọrọ mmasị ndị njem nleta ọzọ na St Eustatius
Eustatius planetarium dome nwere ike ịnabata ndị ọbịa 25 n'otu oge
Ka ọ dị ugbu a, enweghị ụgwọ maka ịbanye na St. Eustatius planetarium ka ọ ka nọ n'ọgbọ ya, agbanyeghị, ndị mmepe egosila na enwere ike ịgba ụgwọ ego ntinye
E nwere ụdị ụdị ole na ole n'ụwa, na dịka Jaap Vreling si kwuo, ọ bụghị ihe karịrị mmadụ ise, ma ugbu a St. Eustatius (Statia) bụ ebe obibi mbara ala mbụ na Caribbean.
Nke a bụ ọrụ mmuta nke Jaap Vreling na Maazị Ishmael Berkel na-eduzi. Jaap na-akụzi na Mahadum Amsterdam ma bụrụkwa akụkụ nke Dutch Research Group of Astronomy na 2010, bụ ebe a malitere ọrụ dome. Ya na ụmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ mmụta mbara igwe 14, ya na domes 3 gara ụlọ akwụkwọ niile na Netherlands, na-egosipụta, na oge ụfọdụ na-etinye mmụta mbara igwe n'ime mmemme ụlọ akwụkwọ, ebe ọnụnọ mbara ụwa dị na saịtị bụ ihe enyemaka dị mkpa maka nkuzi. nke isiokwu.
Ruo ọtụtụ afọ, Jaap rọrọ na ya nwere ike iweta planetarium na Statia. Agwaetiti ahụ bụ Ishmael Berkel, nwekwara echiche ahụ, ma nwee ọtụtụ mkparịta ụka n'etiti ha abụọ iji chọpụta otu esi eme ka ọ bụrụ eziokwu. Ha abụọ nwere ekele maka uru agụmakwụkwọ ya bara, na-amata na mgbe ụmụ akwụkwọ gara mbara ụwa, ha na-ahapụ nwere oke mmasị mmụta. N’ọtụtụ mba nke ụwa, mmetọ dị nfe na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịnụ ụtọ igwe abalị. Statia enweghị mmachi dị otú ahụ mana tupu ugbu a, ọ nweghị nkọwa dị mfe nghọta banyere ihe a na-ahụ anya. Thezọ milky, kpakpando, mbara ala, ọnwa, otu ha si metụta ibe ha, etu ndị nna ochie siri jiri ya mee njem site n'otu ebe ruo ebe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bara uru banyere mbara igwe ugbu a ka a ga-akụzi n'ime gburugburu ụwa na-adọrọ mmasị na Statia. Nleta Planetarium egosila na ọ bara uru maka ụmụ akwụkwọ nọ n'afọ ndụ niile, site na mbido ụlọ akwụkwọ ọta akara. Agbanyeghị, ụmụ akwụkwọ abụghị naanị ndị ga-erite uru. Ọ bụ ahụmịhe onye ọ bụla nwere ike inwe ekele maka ya.
Na mbara ụwa bụ ihe nlegharị anya ndị ọzọ na agwaetiti ahụ. Dome dị na Lynch Plantation, dome nwere ike ịnabata mmadụ iri abụọ na ise n’otu oge. Ejiri sọftụwia kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ a, ndị ọbịa ga-ekpuchi atụmatụ nke ihe nkiri ihe nkiri ya, na-ebute ahụmịhe ezi uche dị na ya ka ha na-agagharị na mbara igwe.
Emeghe gọọmentị ahụ mere na February 23, 2021 na obere ìgwè nke ndị ọbịa a kpọrọ òkù bịara. Ọhaneze na-anabata ileta na February 24, 25, na 26 site na 9: 00 ruo 12: 00 pm. Ka ọ dị ugbu a, enweghị ụgwọ maka ntinye ka ọ ka nọ n'ọgbọ ya, agbanyeghị, ndị mmepe egosila na enwere ike kwụọ ụgwọ ntinye.
Maazị Berkel kwupụtara, sị: “Ọdịnihu dị mma, anyị bịara iji hụ na ndị Stati niile, ndị ukwu na ndị nta, nwere ohere ịnụ ụtọ ya. Anyị na-atụkwa anya na ndị njem nleta na-abịa n'àgwàetiti anyị ga-enwe ike ịbụ ndị a nwere mmasị na mgbakwunye na ezumike ha.